ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆ တစ်ခုကြောင့် ရှမ်းပြည်ပလောင်ရွာလေးထဲက သနားစရာ သမီးလေး ရဲ့ အဖြစ် – Na Pann San
စအိုဝနားမှာ အနာကြီးဖြစ်နေ တဲ့ သမီးလေးဆီ သွားတွေ့ခဲ့တယ် အနားမကပ်ခဲ့ဘူး သူ့အနာလေး ကို လှန်ပြတော့ လက်ကလေးနဲ့ စကတ်ကို ဆွဲဆွဲဖုံးရှာတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ သမီးလေးရေ ….
အစားလည်း မဝင်လို့ အား အရမ်းနည်းနေတော့ အနာကိုခွဲစိတ် ဖို့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့… အခုသွေး သွင်းထားတာ ပါ…။ ဒီအနာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ ရှေးရိုးစွဲ ပလောင်တိုင်းရင်းသား.တို့ရဲ့ အယူအဆ တစ်ခုကြောင့်ပေါ့..
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက တောအရမ်းကျတဲ့ ပလောင်ရွာလေးမှာ သမီးလေးကိုမွေးတော့ တင်ပါးမှာ အသားပိုလို အဖုလေး ပါလာတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး မွေးရာပါ ပါလာရင် နမိတ် မကောင်းဘူး ဆိုပြီး အသားပို အဖုလေးကို ဆံပင်နဲ့ချည်ပြီး ဖြတ်ပစ်လိုက်ကြတယ် မသိခြင်း ရှေးရိုးစွဲခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြသနာကတော့ သမီးလေးမှာ ပိုးဝင်ပြီးခုလို အနာအကြီးကြီးဖြစ် လာတာပါပဲ…
တောင်ကြီးဆေးရုံကြီး မှာ ပြတော့ ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဆေးရုံစရိတ် မတတ်နိုင်လို့ မိဘတွေက ရွာပြန်ခေါ်လာကြတယ် ရွာစာသင်ကျောင်းမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ပလောင်တိုင်းရင်းသူ ဆရာမလေးတ စ်ယောက် က မြင်တွေ့ပြီး မန္တလေးဆေးရုံကြီးကို သူ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်လာပေးတာပါ။
လမ်းခရီး စရိတ်မရှိကြလို့ ကျန်းမာရေးဆရာမဆီက ငွေတစ်သိန်း ချေးပြီးလာကြတာ ဟိုပေးဒီပေးနဲ့ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ သမီးရယ် သူ့အမေရယ် သူ့ဦးလေးရယ် ဆရာမရယ် လူကြီးသုံးယောက် စားစရိတ်က အရင်ကုန်နေရတာမို့ ခွဲစိတ် ကုသကုန် ကျစရိတ် အပြင်စားစရိတ်ပါ ထည့်တွက် လှူဒါန်းပေးမှအဆင်ပြေကြရှာမှာပါ။
အလှူရှင်များ ဆက်ပြီး ဝိုင်းကူပေးကြပါအုံးနော် ။….ကလေးခွဲစိတ်ရမယ့်နေ့ သိရရင် ထပ်ပြောပါ့မယ်…
6.5.20 မနက်ဖြန်ကျရင် ကလေး အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေဝယ်ပေးရင်း သွားတွေ့ပါအုံးမယ်နော် …..
09-4 555 000 10(K Pay)
စအိုဝနားမှာ အနာကွီးဖွဈနေ တဲ့ သမီးလေးဆီ သှားတှခေဲ့တယျ အနားမကပျခဲ့ဘူး သူ့အနာလေး ကို လှနျပွတော့ လကျကလေးနဲ့စကတျကို ဆှဲဆှဲဖုံးရှာတာ စိတျမကောငျးလိုကျတာ သမီးလေးရေ ….
အစားလညျး မဝငျလို့ အား အရမျးနညျးနတေော့ အနာကိုခှဲစိတျ ဖို့ မလုပျနိုငျသေးဘူးပေါ့… အခုသှေး သှငျးထားတာ ပါ…။ ဒီအနာရဲ့ဖွဈစဉျကတော့ ရှေးရိုးစှဲ ပလောငျတိုငျးရငျးသား.တို့ရဲ့ အယူအဆ တဈခုကွောငျ့ပေါ့..
ရှေးရိုးစှဲ အယူအဆ တဈခုကွောငျ့ ရှမျးပွညျပလောငျရှာလေးထဲက သနားစရာ သမီးလေး ရဲ့ အဖွဈ
ရှမျးပွညျ တောငျပိုငျး ရပျစောကျမွို့နယျထဲက တောအရမျးကတြဲ့ ပလောငျရှာလေးမှာ သမီးလေးကိုမှေးတော့ တငျပါးမှာ အသားပိုလို အဖုလေး ပါလာတယျ။ အဲ့ဒီလိုမြိုး မှေးရာပါ ပါလာရငျ နမိတျ မကောငျးဘူး ဆိုပွီး အသားပို အဖုလေးကို ဆံပငျနဲ့ခညျြပွီး ဖွတျပဈလိုကျကွတယျ မသိခွငျး ရှေးရိုးစှဲခွငျးရဲ့နောကျဆကျတှဲပွသနာကတော့ သမီးလေးမှာ ပိုးဝငျပွီးခုလို အနာအကွီးကွီးဖွဈ လာတာပါပဲ…
တောငျကွီးဆေးရုံကွီး မှာ ပွတော့ ခှဲစိတျရမယျဆိုတာနဲ့ဆေးရုံစရိတျ မတတျနိုငျလို့ မိဘတှကေ ရှာပွနျချေါလာကွတယျ ရှာစာသငျကြောငျးမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ ပလောငျတိုငျးရငျးသူ ဆရာမလေးတ ဈယောကျ က မွငျတှပွေီ့း မန်တလေးဆေးရုံကွီးကို သူ ကိုယျတိုငျ ဦးဆောငျပွီး ချေါလာပေးတာပါ။
လမျးခရီး စရိတျမရှိကွလို့ ကနျြးမာရေးဆရာမဆီက ငှတေဈသိနျး ခြေးပွီးလာကွတာ ဟိုပေးဒီပေးနဲ့ ကုနျသလောကျဖွဈနပွေီ သမီးရယျ သူ့အမရေယျ သူ့ဦးလေးရယျ ဆရာမရယျ လူကွီးသုံးယောကျ စားစရိတျက အရငျကုနျနရေတာမို့ ခှဲစိတျ ကုသကုနျ ကစြရိတျ အပွငျစားစရိတျပါ ထညျ့တှကျ လှူဒါနျးပေးမှအဆငျပွကွေရှာမှာပါ။
အလှူရှငျမြား ဆကျပွီး ဝိုငျးကူပေးကွပါအုံးနျော ။….ကလေးခှဲစိတျရမယျ့နေ့ သိရရငျ ထပျပွောပါ့မယျ…
6.5.20 မနကျဖွနျကရြငျ ကလေး အတှကျ လိုအပျတာလေးတှဝေယျပေးရငျး သှားတှပေ့ါအုံးမယျနျော …..
“ကျေးဇူးပါ ဝူဟန်… မြန်မာဖြစ်ရတာ ဒီတစ်ခါပဲ ခေါင်းမော့ ရတော့တယ် ဝူဟန် virus ရယ်.. ၊”
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု မှာ သမ္မတ ညွှန်ကြားချက် ကို မလိုက်နာခဲ့ရင်တော့ ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံပါပဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများ အပါအဝင် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ အားလုံးပိတ်ရမည်ဟု ထုတ်ပြန်